अनानास फोम - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
मिठाई4 मिनेट4 व्यक्ति90२ क्यालोरी
अनानास फोम हो गर्न सजिलो छ कि यो तपाईं चकित हुनेछ। तपाईंलाई केवल ingredients सामग्रीहरू आवश्यक छ र minutes मिनेट भन्दा कममा तपाईंसँग कुनै पनि अवसरमा सेवा दिन स्वादिष्ट मिठाई पाउनुहुनेछ।
यो हामी पहिलो पटक गर्दैनौं छिटो फोम। अब सम्म सधैं हामीले स्ट्रबेरीबाट बनायौं तर हामीले यो संस्करणको प्रयास गर्‍यौं भने हामी यसको हल्का उष्णकटिबंधीय स्वादले विकृत भएका छौं।
तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, अनानास फोम हल्का छ, त्यसैले यसलाई डिनर वा प्रशस्त खाना पछाडि सेवा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। यो धेरै पाचन हो।
1 अनानास फोम
2 के तपाईं अनानास फोमको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
एक ताजा र प्रकाश डेजर्टको मजा लिनको लागि एक सरल र धेरै द्रुत विधि।
कुल समय: 4M
G० ग्राम बिर्च चिनी
P०० ग्राम प्राकृतिक अनानास, छीलो र टुक्रा मा स्थिर
१ चम्मच (डेजर्ट आकार) नीबू वा निम्बूको रस
१ चिसो अण्डा सेतो
हामी गिलासमा चिनी राख्छौं र यसलाई बडबड गर्दछौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
स्थिर अनानासका टुक्राहरू थप्नुहोस् र तिनीहरूलाई क्रश गर्नुहोस् २० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 15-5-१०।
हामीले पुतली ब्लेडमा राख्यौं कि यो राम्रोसँग राखिएको छ। निम्बू को रस र अण्डा सेतो जोड्नुहोस् र को लागी पीट Minutes मिनेट, गति २।
हामी चश्मा वा चश्मामा वितरण र सेवा दिन्छौं।
के तपाईं अनानास फोमको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
यो मिठाई को लागी महान छ गर्मी वा विशेष अवसरहरूमा सेवा गर्नुहोस् किनभने यो एक स्फूर्तिदायक, प्रकाश र पाचन मिठाई हो।
फोम बनाउनका लागि तपाईले चिनीको प्रकार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईलाई धेरै मनपर्दछ र तपाईको डाइटमा मिठो स्वीटनरको साथ पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सन्टी चिनी प्रयोग गर्न मनपराउँदछ वा xiltol जुन हो मधुमेह रोगीहरूको लागि उपयुक्त।
त्यसोभए यो मिठाई तपाइँको लागि उपयुक्त छ अनानास पहिले नै स्थिर गर्नु पर्छ तर उनीहरू ब्लकमा रहन्छन् भनेर बेवास्ता गर्दै।
El चाल सानो टुक्रा मा काट्नु छ, तिनीहरूलाई एक स्पर्श बिना राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई स्थिर गर्नुहोस्। केही घण्टा पछि तपाईं तिनीहरूलाई zip-लक बैग वा कन्टेनरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले तिनीहरू अधिक रहिरहन्छन् र, जब यसलाई कताई आउँदछ, तिनीहरूसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ।
यो फोम हुनै पर्छ यो क्षण मा गर्नुहोस् किनभने, यदि तपाईं अग्रिममा यो गर्नुहुन्छ, यो तल जान्छ। यद्यपि यो यति छिटो छ कि यसलाई ताजा सेवाको लागि यो योग्यको छ।
थप जानकारी - हल्का स्ट्रबेरी फोम / अनानास मुरब्बा
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: स्वस्थकर खाना, सजिलो, Postres, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » अनानास फोम
मारिया जोसेफा भन्यो
कस्तो धनी! म असफल बिना गर्दछु। मलाई तपाइँको व्यंजनहरु मनपर्दछ।
मारिया जोसेफालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद !!
सत्य यो हो कि यो गर्न को लागी धेरै सरल छ र यो शानदार देखिन्छ।
अवश्य पनि, यो सेवाको लागि तपाईले ठीक समयमा गर्नुपर्दछ तर यो लायक छ!
नमस्कार, बर्च चिनी थप्नुको सट्टा, के तपाईं गिलास चिनी राख्न सक्नुहुन्छ? यदि हो भने, कति थप्नु पर्छ? धन्यबाद
हो, तपाइँ आईसिंग चिनी र सामान्य सेतो चिनी पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
रकम एकै हो किनकि यसमा मिठो मिठ्याउने क्षमता छ, जबकि बिर्च चिनीको जीआई7छ, जुन आइसिंग चिनीभन्दा धेरै कम छ, जुन is० हो।